Tinobatsira Sei Hama Dzedu Padzinowirwa Nenjodzi?
Kana pakaitika njodzi yakakura, Zvapupu zvaJehovha zvinobva zvakurumidza kuronga kuti zvibatsire hama dzazvo dzinenge dzawirwa nedambudziko racho. Izvi zvinoratidza kuti tinodanana zvechokwadi. (Johani 13:34, 35; 1 Johani 3:17, 18) Tinobatsira nenzira dzipi?
Tinopa mari. Pakaitika nzara huru muJudhiya, vaKristu vekare vemuAndiyoki vakatumira hama dzavo rubatsiro. (Mabasa 11:27-30) Isuwo patinonzwa kuti hama dzedu kune imwe nyika dzawirwa nenjodzi, tinotumira zvinhu zvekudzibatsira nekuungano yedu.—2 VaKorinde 8:13-15.
Tinovabatsira nezvavanenge vachida. Vakuru vemunharaunda inenge yaitika njodzi vanoona kuti munhu wese wemuungano ari kupi uye kuti akachengeteka here. Komiti yekubatsira panjodzi inogona kuronga kuti vanhu vacho vapiwe zvekudya, mvura yekunwa yakachena, zvipfeko, pekugara, uye mishonga yekurapwa. Zvapupu zvakawanda izvo zvine mabasa azvinogona, zvinozvipira kushandisa mari yazvo kuenda kunobatsira vanhu kana kuti kunogadziridza Dzimba dzeUmambo, nedzimwe dzimba dzinenge dzapazika. Nemhaka yekuti takabatana sesangano uye tine ruzivo rwatakawana nekushanda pamwe chete, hatinonoki kuunganidza zvese zvinenge zvichidiwa kuti tibatsire kana paitika njodzi. Kunyange zvazvo tichibatsira “vane ukama nesu mukutenda,” tinobatsirawo vamwe patinenge tichikwanisa, pasinei nekuti ndevechitendero chipi.—VaGaratiya 6:10.
Tinotsigira vanenge vachishushikana uye tinovanyaradza neMagwaro. Vanhu vanenge vawirwa nenjodzi vanoda kunyaradzwa. Panguva dzakadaro tinowana simba kuna Jehovha, “Mwari wekunyaradza kwese.” (2 VaKorinde 1:3, 4) Tinoudzawo vaya vanenge vawirwa nedambudziko mashoko ari muBhaibheri, tichivapa tariro yekuti pasina nguva Umambo hwaMwari kuchagumisa njodzi dzese dzinoita kuti vanhu varwadziwe uye vatambure.—Zvakazarurwa 21:4.
Sei Zvapupu zvichigona kubatsira nekukurumidza panoitika njodzi?
Tinganyaradza sei vanenge vapona panjodzi tichishandisa Bhaibheri?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Tinobatsira Sei Hama Dzedu Padzinowirwa Nenjodzi?
jl chidzidzo 18